Visits : 6353
Visits : 5666
၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ တိုက်ရိုက် ရွေးချယ်မှုနဲ့ ကျနော် သာလွန်ဇောင်းထက် ၊ ကုမုဒြာက သတင်းထောက် နန်းလွင်၊ ဒီဗွီဘီသတင်းထောက် ကုမောပြေတို့ ပိုလန်နိုင်ငံ National School of Public Administration က ပို့ချတဲ့ Strategic Economic Needs and Security Exercise ကို သွားရောက် သင်ယူခဲ့ရ ပါတယ်။NLD ပါတီက ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးဟံသာမြင့်၊ ဦးမောင်မောင်ဦး...
Visits : 5151
Steve Jobs ရဲ့နာမည်ဟာ Apple နဲ့ ထာဝရ ဒွန်တွဲနေပါ လိမ့်မယ်။ Apple ဟာ သူတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီ၊ သူ အလုပ်က အထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကုမ္ပဏီ၊ နောက် တစ်ခါပြန်လာခဲ့ပြီး ကမ္ဘာမှာ တန်ဖိုးအကြီး မားဆုံးဖြစ်အောင် ဖန်တီးခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ပထမဆုံး ဘီလီယံကို ဖန်တီးပေးခဲ့တာဟာ နောက် ထပ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Pixar ကုမ္ပဏီသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ မေ့နေကြ မှာဖ...
Visits : 6522
ကျွန်တော်ရဲ့ခရီးဆောင်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့က မြန်မာငွေ USD $1000 လဲပေးထားတယ်။ ဟိုမှာ လိုအပ်ရင်ပါလာတဲ့ ပိုက်ဆံကို သူတို့ငွေကြေးနဲ့ ဖလှယ်ပြီး သုံးစွဲနိုင်ဖို့ စီစဉ်ပေးတဲ့ သဘောပါ။ မသုံးရင်လည်း ရပါတယ်။ ကျွန်တောက တက်နိုင်ရင်ပါလာတဲ့ ပိုက်ဆံကို မသုံးဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ မရပါဘူး။ မြင်မြင်သမျှ ပစ္စည်းတွေက ဝယ်ချင်စရာပါပဲ။ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေဆိုရင် မမြင်ဘူးတာ...
Visits : 5986
Visits : 6923
151 - 156 of ( 156 ) records